ကို Ubuntu 18.04 သို့ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲအဆင့်မြှင့်ပါ Linux မှ
Ubuntu 17.xx (သို့) Ubuntu 16.04 ကိုသုံးနေတုန်းပဲ Ubuntu 18.04 အသစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ချင်တယ် LTS၊ မင်းငါ့ကိုပြောပြပါရစေ ကွန်ပျူတာများကိုစနစ်ပြန်တပ်စရာမလိုဘဲသူတို့လုပ်နိုင်သည်.
Ubuntu 16.04 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်untilပြီလအထိဆက်လက်ထောက်ပံ့နေပြီး Ubuntu 2021 ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိသာထောက်ပံ့နိုင်ပြီးယခုဗားရှင်းအသစ်သို့ ၂၀၂၃ အထိအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့မှန်ကန်သော update ကိုလုပ်ရန် သင်လိုအပ်သမျှသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကောင်းဖြစ်သည် နှင့်အခြားဘာမျှမ။
ဒီမွမ်းမံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာမွမ်းမံချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖိုင်များအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပေါ် မူတည်၍ အချိန်ကြာမြင့်သည်။
una ငါများသောအားဖြင့်ပေးသောထောက်ခံချက် ဒီ update လုပ်ခြင်းသည်သင်၏ဒေတာကိုအလျော့မပေးသော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်များကို back up လုပ်ပါ မည်သည့်မေးခွန်းကိုသည်။ သင်၏ $ HOME ဖိုင်တွဲနှင့်အရေးကြီးသော configuration ဖိုင်များ၊ browser setting နှင့်သင်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆသောအရာများဖြင့်အရံကူးပါ။
1 Ubuntu 18.04 ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲ။
1.1 update manager နှင့်အတူ Ubuntu 18.04 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
2 terminal မှ Ubuntu 18.04 LTS သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
Ubuntu 18.04 ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲ။
ကျနော်တို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်လိုပါက graphical interface ဖြင့်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ update ကိုနည်းလမ်းများနှင့်အတူစတင်မီ အချို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အလွန်လိုအပ်သည် ဒီအဘို့, ငါတို့အသင်း၌တည်၏ ကျွန်ုပ်တို့သည် "Software and Updates" ကိုသွားရမည်။ ငါတို့ applications များ menu ကနေရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်မှာငါတို့ရှိရမယ် မွမ်းမံမှုများ tab တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားပါ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသသောရွေးချယ်မှုများအကြား "Ubuntu version အသစ်အကြောင်းကြားပါ" ဒီမှာ ရွေးစရာကိုရွေးကြစို့ ငါတို့ကိုပေးတဲ့ "မဆိုဗားရှင်းအသစ်"သို့မဟုတ်လည်း"ရှည်လျားသောထောက်ခံမှုဗားရှင်း"။
update manager နှင့်အတူ Ubuntu 18.04 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
Wizard ၏အကူအညီဖြင့် update ကိုပြုလုပ်ရန်၎င်းကို install ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိသည်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကို Ubuntu သို့မဟုတ် Synaptic software center မှထောက်ပံ့နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသာကြည့်သင့်သည်။
အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် terminal မှသင်လုပ်နိုင်သည်။
ယခု update မလုပ်မီဤ command များကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးလိုပါသည်။
ယခုသင်နောက်ဆုံးပေါ် packages များ install လုပ်ပြီးလျှင်, အောက်ပါ command ဖြင့် update manager ကို run ပါ:
၎င်းသည် Software Updater ကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်၎င်းသည် Ubuntu 18.04 ရရှိနိုင်မှုကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ “ update” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် Ubuntu Bionic Beaver ၏ဖြန့်ချိသည့်မှတ်စုမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဒီမှာ Update ကိုနှိပ်ပါ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်နောက်တစ်ကြိမ်အချိန်။ Ubuntu 18.04 LTS အတွက်ဖြန့်ချိမွမ်းမံမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် software channel အသစ်များကိုစတင်စီစဉ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် "Start update" ကို နှိပ်၍ system ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မွမ်းမံမှုစတင်ပါလိမ့်မည်။ စနစ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်တောင်းဆိုလျှင်၎င်းသည်ပြီးဆုံးရန်သာစောင့်ရမည်။
terminal မှ Ubuntu 18.04 LTS သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
ယခုဤအဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ command အချို့ကိုသာရိုက်ရသည် နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုစောင့်ပါ။
Ubuntu 18.04 LTS သို့မွမ်းမံခြင်းဖြင့်စတင်ရန် ကျနော်တို့က terminal ကိုဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်သည် အထုပ် update ကို command များ:
ခဏကြာနိုင်တယ် သင်သူတို့ကိုပြန်လည်စတင်ရန်တောင်းဆိုပါကသူတို့လုပ်ပါ။ ယခုဟုတ်တယ်ဒီပြီးပြီ ဗားရှင်းအသစ်သို့မွမ်းမံရန် command ကို run ကြပါစို့ဒီ command ကတော့
ဒီ command ကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါအောက်ပါ legend ကိုပြလိမ့်မယ် -
system ကို update လုပ်ရန်အောက်ပါ parameter ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Ubuntu 18.04 သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
ဟယ်လို! ငါ Ubuntu 17 ကနေ 18 အထိအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Note ရဲ့ webcam ကအဲဒါကိုမသိဘူးဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိပါသလား။
Ubuntu 16.10 မှ Ubuntu 18.04 LTS သို့တိုက်ရိုက်သင်ဖော်ပြနိူင်သည့် terminal command များကို သုံး၍ တိုက်ရိုက် upgrade လုပ်နိုင်ပါသလား။
Ubuntu 16.04 lts ဗားရှင်းကိုမည်ကဲ့သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
1st ဤဗားရှင်း (Ubuntu 17.10) ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
ဒုတိယ 'zesty' မှ 'bionic' သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုဤကိရိယာဖြင့်မထောက်ပံ့ပါ။
နှင့် update လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ
ဆိုလိုတာက Ubuntu 18.04 ကို scratch ကနေ install လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ operating system ကို ၁၈.၀၄ မှ ၂၀.၀၄ ကိုမွမ်းမံရန်သူ၏သင်ခန်းစာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြု။ terminal ကိုကနေကိုပြု၏။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာလုပ်ငန်းစဉ်လေးနာရီကြာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ဖိုင်တွေအားလုံးသိမ်းဆည်းထားလို့အဲဒါကိုတန်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူတို့ကိုတစ် ဦး မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတက်ကျောထောက်နောက်ခံရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Heike Niemann ဟုသူကပြောသည်
Ég kann ekkertátölvi။ ekkvern á austurlandi sem kann hjalpar mer, ekki bara í gekk frá
Heike Niemann အားစာပြန်ပါ
သင်၏ Home Folder ကို Ubuntu 18.04 တွင် encrypt လုပ်ပါ